श्रीमानलाई कसरी खुसी बनाउने? जान्नुहोस् यस्ता छन् उपाय « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
श्रीमानलाई कसरी खुसी बनाउने? जान्नुहोस् यस्ता छन् उपाय
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:३०
अहिलेको बदलिदो समाजसँगै वैवाहिक सम्वन्धमा धरै समस्याहरु आउन थालेका छन् । यसकारणले बैवाहीक जीवनको सम्वन्ध कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था समाजमा दखिन्छ ।
त्यसकारण अहिलेको बदलिदो समयसगै सम्वन्ध विच्छेदका घटना दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । हामीले बैवाहिक सम्वन्ध कमजोर हुदै जाने कारण केलायौ भने पक्कै पनि भावनात्क सम्वन्ध कम भएको कारण र अर्को श्रीमान श्रीमती एक अर्कासँग खुसि नभएको कारण विवाह संकटमा परेको देखिन्छ ।
जव विवाह हुन्छ हर श्रीमान श्रीमती एक अर्काप्रति समरपित साथै खुसी खुसि राख्योस भन्ने सोच भएको हुन्छ । महिला या पुरुष दुबैमा त्यसकारणमहिलाले मात्र होइन समाजका हरेक प्राणीले यहि सोच्ने गर्दछ कि एउटा श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई सधैँ खुसी राख्नुपर्छ ।
श्रीमती पनि आफ्नो श्रीमानलाई यसैगरी खुसी राख्न चाहन्छिन् । श्रीमान–श्रीमती एक रथको दुई पाङ्ग्रा भएका कारण दुबैको खुसी महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
तर यदि कहिलेकाँही तपाईंको श्रीमान उदास देखिएमा तपाईंले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हुनसक्छ तपाईंका श्रीमान् तपाईंका कारण नै दुखी भइरहेका छन् ।
तपाईंको कारण र अरु कसैका कारणले तपाईंको श्रीमान तनावमा भइरहेको तपाईंलाई राम्रो नलाग्न सक्छ ।
आज हामी तपाइलाई श्रीमानलाई कसरी खुसी बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौ ।
१. उनको जिम्मेवारीलाई बाँड्नुहोस्-
२.उनको कुराहरु सुन्नुहोस्-
३.पैसा बगाउन बन्द गर्नुहोस्ः
४. उनको करियरमा रुची लिनुहोस्-
५. बेकारको बहस नगर्नुहोस्-
६.श्रीमतीहरु आफ्नो श्रीमानसँग बेकारमा बहस गरेर कुरा लम्ब्याउने गर्दछन् । जसले गर्दा सम्बन्ध नै खतरामा पर्न सक्छ । तपाईं भने यस्तो गर्नबाट बच्नुहोस् ।
५. बेडमा उनलाई खुसी राख्नुहोस्-
यदि आफ्नो श्रीमानलाई बेडमा खुसी राख्ने तरिका आउँछ भने तपाईं निकै भाग्यमानी हुनुहुनेछ । बेडमा अल्छीपन नदेखाउनुहोस् ।
७. आफ्नो जीवन पनि बाँच्नुहोस्-
८.उनलाई तपाईंको कार्यक्रमको जानकारी दिनुहोस्-
९. भविष्यको योजना एकसाथ बनाउनुहोस्-
१०.आर्थिक रुपमा उनलाई कहिले पनि धोका नदिनुहोस्-
११. उनको साथी बन्नुहोस्:
तपाईंहरु दुईमा श्रीमान-श्रीमतीको भन्दा साथीको सम्बन्ध बढि हुनु आवश्यक छ । आफ्नो श्रीमानको साथी बन्नुहोस्, ।
१२.उनको आमा-बुवालाई इज्जत गर्नुहोस्-
जसरी तपाईं आफ्नो आमा–बुवालई माया र इज्जत गर्नुहुन्छ त्यसरी नै आफ्ना श्रीमानका आमा–बुवालाई सम्मान गर्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १७:३०
जान्नुहोस् ! रातो मासु कति ग्राम प्रतिदिन खान स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ ?
सामान्यतया रातो मासु सेवन गर्न हानिकारक मानिन्छ । तर एक अनुसन्धानमा रातो मासु सेवन स्वास्थ्यको
कोरोना भ्याक्सिन २ दिनभित्र सार्वजनिक प्रयोगका लागि अनुमोदन हुने
सरकारी नम्बर प्लेटबाहेक अन्यलाई जोरविजोर प्रणाली कडाईका साथ लागू
चुम्बन पाउने आशामा बुर्का लगाएपछि प्रेमी पुगे सिधै जेल
देशका पहाडी भेगमा दुईदर्जन करदाता सेवा कार्यालय विस्तार
साँगा नाकामा कडाइ, पैदल यात्रीलाई समेत उपत्यका प्रवेश गर्न रोक